बिहीबार, वैशाख २२, २०७९ रवि किरण आचार्य
त्यति सजिलो कहाँ हुन्छ र ? मैले सवाल बुझेको छैन तर प्रतिप्रश्न आइहाल्छ । सजिलो केलाई भन्ने म धेरैबेर घोत्लिएँ । तर सकिन अर्थ बुझ्न । त्यक्तिकैमा मनमा थुप्रै कुराहरु खेल्न थाले, मानौं म भित्रै ठूलो खेल मैदान छ । तर, मैले सवाल बुझ्न सकेको छैन, कोशिस नगरेको त पक्कै होइन तथापि सफलता हात लाग्न सकेको छैन । म निरन्तर अभियानमा छु, मेरो आफ्नै तरिका छ, यसमा कसैलाई सवालजवाफ गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम नबनोस् भन्न चाहन्छु । उ बेला हाम्रो संस्कारले हुर्काएको त्यो परिदृश्य अचेल पूर्णताजगी कसो हुँदैन होला र ? बाटोमा रुखबिरुवाबाट झरेका पहेंला पातहरु बजाउँदै अनि कल्कलाउँदो खोलाको सुमधर स्वरले गमबुटको आवाजलाई प्रतिध्वनीको संज्ञात्मक भाव दिन्थ्यो । चुलबुले स्वभाबका हामी घरी के घरी के एक पछि अर्को मानौं कुनै मेलामा दौडिरहेका हुन्थ्यौं । समयक्रमले मानिसलाई बिभिन्न अबस्थाहरुबाट गुजारिरहेको तथ्यलाई नकारात्मक भासबाट सच्याउन जरुरी छ वा छैन, छलफलको बिषय हुनसक्छ ।
इतिहास बिगतको साक्षी हो । तर, अचेल इतिहास बन्ने कुराको सवालजवाफमा कुनै रौनक छैन । छ त केवल बर्तमानको सौदाबाजी मात्र । लाग्छ यो एउटा उदीयमान चरित्र हो, समकालीन समाजको चित्रण गर्ने प्रतिज्ञा पत्र जस्तो । समाज ब्यबस्था अनि त्यस्तै त्यस्तै के के हो के के हामी फलाक्छौं तर सत्य भिन्न हुन्छ । आदर्श मरेको त हुँदैन तर त्यसमा के तुक हुन्थ्यो र ? खाली देखावटी ढाकछोपले लाज पचाउन सिक्ने प्रबृत्तिको रंगमंचमा नाच्न नजान्ने आँगन टेढोको के अर्थ होला र कुन्नि ? थुपै सवालहरुका बाबजुद पनि म जवाफ खोज्ने क्रमबाट बिचलित भएको छैन । जिन्दगीको लामो यात्राको पहिचान बनाएका र बनाउन चाहनेहरु बीचको तुलनात्मक प्रबृत्तिको अध्ययन किन गर्नुपर्यो भन्दा नि मनले पटक्कै नमान्दा म यो भासमा पनि चित्र कोर्ने जमर्कोबाट कसरी पछि हटुँ र ? एउटा प्रबृत्तिले पाखा लगाएपछि ती कर्मठ हातहरु फैलिने ठाउँको कुनै निसपत्तो छैन । जीवन भर एउटा बिशुद्ध उद्देश्य बोकी हिँड्नेहरु अचेल गुमनाम बसिरहेका छन् । ती योद्धा थिए कि युद्धका सारथी त्यो इतिहासले मूल्यांकन गर्ला । तर, के के मिलेको छैन जस्तो मानौं दालमा चामल मिसाएर बनाएको परिकार खिचडी जस्तो । हामी त्यसको महिमा माघ महिनामा बिशेष मान्दछौं । तर, यहाँ सधैं खिचडी पाकिरहन्छ, रंगी बिरंगी बिभिन्न स्वादमा । यताबाट उता र उताबाट यताको मन्त्रमा जपिन ठिक्क छ अहिले समाज भित्रको एउटा पर्याय अनि ती बिभूषित हुँदै मानौं उच्च ओहदामा आली समान भएका छन् भन्दा कसो अत्युक्ति नहोला र ?
जसले जे गरे नि हुने अतिरन्जित ब्यबस्थाको पयार्यवाची संस्कारले सिकाएको एउटा चरित्र हाबी हुँदा इमान्दारहरुको यहाँ कुनै गुञ्जायस छैन । जसोतसो मामुली ब्यबहार चलाइरहेकाहरुको गुन्जायसमा आँच आउने गरी क्षणिक हौवा फैलाएर जबर्जस्त दिग्भ्रमित पारी भद्धा मजाक गर्नेहरु अचेल छरपष्ट देखिन्छन् । किन किन कच्चा आदर्शको खोल ओढी सच्चरित्रबादी बन्ने प्रबृत्ति हावी भएको देख्दा लाग्छ यी निकम्मा त हुन् तर निकम्मित हुन चाहँदैनन् बरु सौदाबाजीमै रहर मिसाउँछन् । बडो बिचित्र लाग्छ, हिजो सर्बत्र नाङ्गिएका हरु अचेल छमछमी नाच्छन् अनि लयमा गाउँछन् । साधन र साध्य फरक कुरा हुन् वा के हुन् मैले छुट्याउन नसक्ने भएँ । एनकेन प्रकारेन सैद्धान्तिक सहमति वा बिचलन वा अन्य म रोज्न सक्ने अबस्थामा छैन ।
अधिकार र कर्तब्य एक अर्कामा सहसम्बन्ध राख्दछन् तथापि अधिकारको एकतर्फी रटानले कर्तब्यनिष्ठहरु बिचलित हुँदै जाने बाध्यकारी प्रबृत्ति अचेल मौलाउँदो छ । हामी के गर्छौं वा गर्नुपर्छ भन्ने बिषय कसरी मुखरित हुँदैछ बिश्लेषणत्मक बहसको बिषय बन्नुपर्दछ । अधिकार खोज्दा कर्तब्य पथबाट दिग्भ्रमित हुनेमा प्रशस्त आधारहरु देखिन्छन् । तथापि गलपासो नमान्नेहरु नाटक मन्चन गरी लिस्नो चढ्न छाड्नेवाला छैनन् । प्रायश्चित हुन सिक बरु सिकाउ अरुलाई पनि तर जबर्जस्तीको अहमताबाद स्विकार्य हुनेवाला छैन । बिकृत नजिर बनाउन खोज्नु प्रणाली भित्रको गलत ब्याख्या हो र यसबाट अन्ततगत्वा समग्र परिबेशको चित्रण सहीरुपमा हुन सक्दैन । सामाजिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक वा अन्य कुनै पनि मान्यताभित्र यस प्रकारका तिकडम वाज अट्नुहुँदैन भन्ने ध्येयले स्थान लिएको हुनुपर्दछ । यसैका आधारमा समाजको बर्गीकृत स्वरुपलाई सरल र ब्यबहारिक समाज बिकासमा रुपान्तरण गर्न जरुरी छ ।
सूचना र संचारको सही सदुपयोग भन्दा अफवाह फैलाउनेहरु समाजमा सही वा गलत के हुन् बहसको बिषय बन्न नसक्ला तर अपब्याख्याको पनि ब्याख्यात्मक टिप्पणी कसो जरुरी नपर्ला र ? समाजलाई दलदल भासबाट उकास्ने र सचेत बनाउने गतिलो साधनमा अगतिलो खेल खेल्दा भलै खेलाडीहरु त अब्बल वा परिस्कृत त होलान् तर हाम्रो आस्थाको धरोहर नैतिकताको कुनै मूल्यमान्यता रहने छैन । जागृतिको एउटा पाटोले समाजलाई सकारात्मक दिशामा डोर्याउँछ, यसमा कुनै शन्देह छैन तर आर्थिक लाभहानीको चलखेल वा बिशेष बिशेषणयुक्त रजगजको गुपचुप राख्ने प्रबृत्तिको पटाक्षेप नगरी समाज र यसका पात्रहरु सही दिशामा अगाडि बढ्न सक्ने कुरामा शंका उत्पन्न हुनसक्छ । तथापि बिकृत पात्र मौलाउने ठाउँ राख्नुहुँदैन भन्ने कुरामा समाज एक ढिक्का नभई धरै छैन । पात्र र प्रबृत्ति फरक कुरा हुन् । समाजमा पात्रले प्रबृत्तिलाई र प्रबृत्तिले पात्रलाई इंगित गरिरहेको हुन्छ । असल पात्रको सही प्रबृत्ति र खराब पात्रको निच प्रबृत्ति बीचमा द्वन्द भई समाज अग्रसरित भएको देखिन्छ । खराब पात्रलाई काखी च्याप्नेहरु बहादुरीको तक्मा पाई भ्याउँछन् भने खराब चरित्र आफैंमा मौलाउँदै जान्छ । यिनीहरु फगत बहस, पैरबीमा समाजलाई धुमिल्याइरहेका हुन्छन् । उन्मुक्तिको टिकट टाँसेर शुद्ध हुन खोज्ने प्रबृत्ति कहिलेसम्म होला कुन्नि ? मैले यी सबै सवालहरुको जवाफ खोज्ने जमर्को गरिरहेको छु र यसैमा अल्मलिरहेको पनि तर बिकृत प्रबृत्तिको हौवा पिट्नेहरु पिटिरहेका छन् र हुनेछन् ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, वैशाख २२, २०७९, ०९:२२:००